मेरो म्वाइँ सस्तो छैन–रेखा थापा – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
मेरो म्वाइँ सस्तो छैन–रेखा थापा
नायिका रेखा थापा सधै“ चर्चामा । सिनेमा निर्माण गर्दा होस् या श्रीमान् छवि ओझास“ग पारपाचुकेको समयमा होस् । चलचित्र यात्राको समयमा चर्चा र विवादमा छाइरहने रेखा फेरि एकपटक चर्चा र विवादमा तानिएकी छिन् । राउटे समुदायलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न उनीहरूमाझ पुगेकी रेखाले एक राउटे पुरुषलाई च्याप्प समातेर म्वाइ“ खाएपछि उनको त्यो म्वाइ“ विवादमा तानिएको छ ।
यतिबेला काठमाडौंबाहिर आफ्नो रेखा फाउण्डेसनका लागि सहयोग जुटाउन लागिपरेकी रेखास“ग मंगलबार फोनबाटै गरिएको म्वाइ–संवाद ।
० जीवनमा धेरैलाई म्वाइ“ खानुभयो होला । यसपटकको म्वाइ“ विवादमा तानियो नि ?
– विवादमा तानिएको होइन । मेरो चर्चालाई देख्न नसक्नेहरूले चलाएको हल्ला हो ।
० के सोचेर राउटेलाई म्वाइ“ खाइयो ?
– म्वाइ“ भनेको मायाको प्रतीक हो । माया लागेर खाएकी हु“ ।
० राउटेलाई देख्दा किन म्वाइ“ खान मन लाग्यो ?
– माया लागेर आयो । तर, यसलाई गलत अर्थ लगाइयो ।
० कस्तो मान्छेलाई देख्दा म्वाइ“ खाउ“m–खाऊ“ जस्तो लाग्छ ?
– मायालाग्दो, मिजासिलो र राम्रो मान्छेलाई देख्दा ।
० त्यस्तो मान्छे जसलाई जहा“ देखे पनि म्वाइ“ खाइन्छ त ?
– हेइन, त्यस्तो हु“दैन । ठाउ“, परिवेश, पात्र सबैको विचार गरिन्छ ।
० म्वाइ“ खानुअघि राउटेस“ग अनुमति लिनुभएको थियो कि थिएन ?
– कसैको पीडा, दुःख र व्यथामा मलहम लगाउन अनुमति लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म त सरकारले पनि नगरेको राउटे समुदायलाई सहयोग गर्न गएकी हु“ । त्यही समयमा भावविह्वल भएर म्वाइ“ खाए“ ।
० जबर्जस्ती म्वाइ“ खानु यौन हिंसा हो कि होइन ?
– हो । तर, मेरो म्वाइ“ जबर्जस्ती थिएन । मेरो म्वाइ“लाई गलत अर्थमा बुझ्नेलाई म सुझाव दिन चाहन्छु कि सहरमा बसेर विरोध गर्नुभन्दा राउटेहरूकै बस्तीमा गएर बुझ्दा थाहा हुन्छ त्यहा“को अवस्था कस्तो छ भनेर ।
० यदि कुनै पुरुषले त्यसरी नै तपाईंलाई म्वाइ“ खाएमा के गर्नुहुन्थ्यो होला ?
– त्यो त म्वाइ“ खा“दाको अवस्था अनि परिस्थितिमा भर पर्छ । किन र केका लागि खाइयो भनेर ।
० जीवनमा अहिलेसम्म कतिजनालाई म्वाइ“ खानुभएको छ ?
– मायालाई सङ्ख्याले नापि“दैन । अनि म्वाइ“ माया नै हो ।
० आफूले खाएको म्वाइ“मध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा मीठो म्वाइ“ कसलाई खादा लाग्यो ?
– मेरी आमालाई ।
० म्वाइ“ खा“दाको सबैभन्दा मीठो क्षण ?
– कुन उद्देश्यले खाएको हो त्यसमा भर पर्छ । लामो समयपछि भेटिएको साथीलाई खा“दा मित्रताको क्षण । श्रीमान्लाई खा“दा नजिकको सम्बन्ध अनि राउटे भाइलाई खा“दा उसको दुःख र पीडालाई साथ दिएको क्षणको रूपमा लिएकी छु ।
० राउटेको म्वाइ“ विवादमा आयो नि । उनीहरू रिसाएका छन् भन्ने चर्चा छ नि ?
– गलत हो यो कुरा । विवादमा आएको होइन । विवादमा ल्याइएको हो । म त राउटे समुदायलाई बिनास्वार्थ सहयोग गरिरहेकी छु । उनीहरूका बच्चालाई पढाउन काठमाडौं ल्याउ“दै छु । यस्तो कुरातिर ध्यान छैन तर म्वाइ“को चर्चा बढी भयो ।
० राउटे मुखियास“ग माफी माग्ने विचार गर्नुभएको छैन ?
– यो त माफीको कुरै होइन । निस्वार्थ रूपले खाइएको म्वाइ“ र गरिएको सहयोगमा माफीको कुरा आउ“छ र ?
० अब भविष्यमा कसैलाई म्याइ“ खा“दा विचार गर्नुहुन्छ होला नि ?
– मेरो म्वाइ“ त्यति सस्तो पनि छैन नि जसलाई जहा“ पनि खान्छु । म्वाइ“ भनेको माया, सद्भाव र भावनाको प्रतीक हो ।
० तपाईं माओवाद छाडेर म्वाइ“वादतिर लागेको होइन, त्यसो भए ?
–मैले माओवादी छोडेको पनि छैन र म्वाइ“वादतिर लागेको पनि छैन । यी दुवै अलग कुरा हुन् ।
(घटना र विचार साप्ताहिकबाट साभार)
गायक बन्छु सोचेको थिइनँः राजु लामा(मंगोलियन हार्ट)
हिरोइनलाई म्वाइँ खाने भाग्य छैन-जितु नेपाल